ဒုတိယမြောက်မြန်မာရုပ်ရှင်ကား | Myanmar Motion Picture Organization
Myanmar Motion Picture Organization, MMPO
ပထမဦးဆုံး မြန်မာ့ရုပ်ရှင် မေတ္တာနှင့်သူရာ ဇာတ်ကားကို ၁၉၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ(၁၃)ရက် ရွိုင်ရယ်စီနီမာရုံတွင် ရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ ရုံတင်ပြသစဉ်က ပရိသတ်များ ရုံပြည့်ရုံလျှံ အားပေးကြည့်ရှုကြသည်။ ကြားခုံများထိုးရခြင်း၊ တချို့မတ်တတ်ရပ်ကြည့်ခြင်းများဖြင့် အားပေးမှုအပြည့်အဝရကြသည်။ ပြသနေသည့်အချိန်တွင်လည်း ထိုးထားသောစာတန်းများကို တစ်ရုံလုံးလိုက်ဖတ်ကြသည။ စာဖတ်သံများ တဝေါဝေါဆူညံနေသလို ရွှီခနဲအသံ၊ လက်ခုပ်သံများ ဆူညံစွာထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးကားဖြစ်၍ "တုန်ခြင်းမှုန်ခြင်းသည်းခံပါ" ဟူသော မေတ္တာရပ်ခံစာကိုပင် သတိမထားမိတော့ပေ။ တစ်ရုံလုံးအားပေးကြည့်ရှုသံများ ဟိန်းဟိန်းညံအောင် ဖြစ်သွားသည်။
ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရကျိုးနပ်သွားသဖြင့် ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်တစ်ကားရိုက်ကူးရန် ကြိုးစားလာကြသည်။ မြန်မာအဆွေ company မှဦးစီးထုတ်ဝေသော ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်းသို့ မော်လမြိုင် ဦးအုံးမြိုင်ထံမှ ရေးသားပေးပို့သော ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကောင်းကြောင်း၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသင့်ကြောင်း ဦးတင်နွယ်မှပြောကြားလာသည်။ ဦးတင်နွယ်က ဦးညီပုကိုပြောကြားပြီး ဦးညီပုက ရုပ်ရှင်နောက်တစ်ကားရိုက်ကူးရန် ဇာတ်လမ်းရှာနေသော ဦးအုံးမောင်တို့ကို ပြလိုက်သည်။ ဦးအုံးမောင်က သဘောကျသဖြင့် ဦးပုမှတစ်ဆင့် ဆရာကြီး ဦးနှင်းမိုးအား ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနိုင်ရန် ရေးသားဆောင်ရွက်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံသည်။ ဆရာကြီးပီမိုးနင်းက မူလဝတ္ထုအမည် "မနုကျေးတောသူ" ကို "ကျေးတောသူမနု" ဟု နာမည်ပြောင်းကာရေးပေးသည်။
ဒုတိယမြောက်မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကား ကျေးတောသူမနုတွင် ဇာတ်လိုက်မင်းသားအဖြစ် ဦးညီပုကိုပင်ရွေးချယ်လိုက်သည်။ မင်းသမီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပေးမည့်သူကို ရှာကြပြန်သည်။ ထိုစဉ်က ဦးညီပုတို့ မြန်မာအဆွေတိုက်ဆိုင်ကြီးတွင် စာရေးတစ်ဦး၏အကူအညီဖြင့် ကြည့်မြင်တိုင် စမ်းချောင်းမှ မငွေမြိုင်ကိုရှာတွေ့သည်။ မငွေမြိုင်က အရပ်ယိမ်းများတွင် ပါဝင်ကပြလေ့ရှိသည်။ မျက်ခုံး၊ မျက်ဖန်၊ နှာတံ၊ ကိုယ်နေကိုယ်ဟန်သင့်တင့်ကြောင်း ပြောပြသဖြင့် အုပ်ထိုန်းသူများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ ငှားရမ်းလိုက်သည်။
ဦးညီပုမှာ ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သော စာအုပ်စာတမ်းများကို ဖတ်ရှုလေ့လာသည်။ ဇာတ်လိုက်မင်းသားမင်းသမီးများ ပိတ်ကားပေါ်တွင် အသားဖြူချောမွတ်စေရန် မိတ်ကပ်ခေါ်လိမ်းဆေးများ လိမ်းပေးရကြောင်းတွေ့ရသည်။ အများသုံးစွဲနေကြသော အင်းစိန် ဖာရာစီမျက်နှာချေကို သကြားရည်နှင့်ဖျော်လိမ်းကြရသည်။ နှုတ်ခမ်းနီရန် အမွှေးတိုင်ထုတ်သော စက္ကူအနီ (သို့မဟုတ်)ယပ်တောင်အနီနှင့် နှုတ်ခမ်းကို ပွတ်ကြရသည်။ မျက်ခုံးမွှေးအတွက် တရုတ်မှင်တောင့်ကိုသွေးပြီး သွားပွတ်တံဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ရသည်။ စသည်စသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်မှုများ တဆတဆတိုးတက်လာသည်။ နှာတံပေါ်အောင် မည်သို့လိမ်းခြယ်ရမည် မေးရိုးကားလျှင် မည်သို့လိမ်းခြယ်ရမည်စသော မိတ်ကပ်ပညာများပါ တိုးတက်အောင် စတင်ဖတ်ရှု ကြံဆောင်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်က ရုပ်ရှင်ဆိုသည်မှာ မမျှော်မှန်းရဲသော ကိစ္စတစ်ခုဟု မှတ်ယူကြသည်။ ဦးအုံးမောင်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ကြိုးစားစဉ်ကပင် အပြစ်တွေအမျိုးမျိုးတင်သည်။ မမျှော်မှန်းနိုင်သော ကိစ္စကို ကြိုးစားနေသဖြင့် ရုပ်ရှင်ရူးတွေဟု ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုကြသည်။ သို့သော် ထိုအသံများ တဖြည်းဖြည်းပိတ်သွားကြပြီဖြစ်သည်။ မေတ္တာနှင့်သူရာရုပ်ရှင်ဖြင့် မြန်မာရုပ်ရှင်ကားရိုက်ကူးနိုင်သည်ကို သိကြသဖြင့် စိတ်ဝင်စားလာကြသည်။
ဦးညီပုမှာ ကျောင်းသားများသပိတ်တွင် ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ သပိတ်များပြန်လှန်လျှင် ဦးညီပုကျောင်းထုတ်ခံရကြောင်းစာတစ်ခုတွင် ဖတ်ရှုမှတ်သားဖူးသည်။ ဦးညီပုကို မိဘများက အင်္ဂလန်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားရန် စီစဉ်နေချိန်ဖြစ်သည်။ ကျေးတောသူမနုဇာတ်ကားရိုက်ကူးချိန်တွင် ဦးညီပုအချိန်ပေးနိုင်သဖြင့် နေ့စဉ်ရိုက်ကူးလာနိုင်သည်။ မေတ္တာနှင့်သူရာဇာတ်ကားကို ကင်မရာအခက်အခဲကြောင့် လည်းကောင်း၊ ဖလင်အခက်အခဲကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကူးဆေးကိစ္စများ၊ စတင်စမ်းသပ်၍လည်းကောင်း စသည် စသည်အကြောင်းများကြောင့် တစ်နှစ်ကျော် ကြာမြင့်သည်။ ထို့အပြင် ငွေကြေးအားဖြင့်လည်း အခက်အခဲများစွာရှိသည်။ ဦးထွန်းရှိန် ဈာပနသတင်းကားကို ပထမဦးဆုံးအချိန် ရုံတင်ပြသစဉ် ရုံပိုင်ရှင်က (၂၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူ၍ နိုင်ငံခြားကားဖြင့် ပူးတွဲပြသသည်။ မေတ္တာနှင့်သူရာဇာတ်ကား ရိုက်ကူးပြီးချိန်တွင်လည်း (၂၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူသဖြင့် ဦးအုံးမောင်တို့အား ဝမ်းသာအားရရောင်းချခဲ့သည်။
ဦးအုံးမောင်တို့က ရုပ်ရှင်ကို စီးပွားရေးတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရသည်ဟူ၍ ခံယူချက်မရှိသေးပေ။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ပေါ်ထွန်းစေလိုသော စေတနာတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကားများကို တစ်ကားပြီးတစ်ကားထွက်ပေါ်လိုသော စေတနာရှိသည်။
ဇာတ်လမ်းအရ ဦးညီပုက မောင်မြင့်၊ ဒေါ်ငွေမြိုင်က မနု၊ ဦးပုက လူကြမ်းတုတ်ကြီး၊ ဦးပါကြီးက မနု၏ဖခင်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြသည်။ ကျေးတောသူမနုဇာတ်ကားကို (၃)လနှင့်အပြီး ရိုက်ကူးနိုင်သည်။ ၁၉၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ရုံတင်ပြသရာ ရုံပြည့်ရုံလျှံအားပေးကြည့်ရှုကြသည်။ မေတ္တာနှင့်သူရာဇာတ်ကားကို ၁၉၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၃)ရက်နေ့တွင် ရုံတင်ပြသခဲ့ရာ ဒုတိယမြန်မာရုပ်ရှင်ကား ကျေးတောသူမနု ရုံတင်ရက်နှင့်ဆိုလျှင် (၅)လမျှသာ ကွာခြားကြောင်းတွေ့ရသည်။ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းအသိပညာတွေ ရုပ်ရှင်ဗဟုသုတတွေ ရရှိလာသဖြင့် မြန်ဆန်သွက်လက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကျေးတောသူမနုဇာတ်ကားတွင် မင်းသမီးဒေါ်ငွေမြိုင်မှ ဇာတ်ကောင်မနုအဖြစ်ပါဝင်ရသည်။ မနုကို အစွဲပြု၍ မင်းသမီးမငွေမြိုင်မခေါ်ဘဲ ခင်ခင်နုဟူသော နာမည်ကျော်ကြားသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၂၁ ခုနှစ်က မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတော့မည့် လက္ခဏာများပင်ဖြစ်သည်။ ပထမကား မေတ္တာနှင့်သူရာထက် ဒုတိယကား ကျေးတောသူမနုက ထူးခြားချက်များစွာရှိလာပါသည်။ ဥပမာ- မေတ္တာနှင့်သူရာ ရုံတင်ပြသစဉ်က စန္ဒရားတစ်လုံးဖြင့် ဇာတ်ပို့တီးခတ်ပေးရသည်။ လွမ်းခန်းဆိုလျှင် အလွမ်း ထိုးခန်းကြိတ်ခန်းဆိုလျှင် ဗိန်းမောင်းတီး၍ ဇာတ်ရှိန်မြှင့်ပေးရသည်။ ပိတ်ကားပေါ်မှ အရုပ်များ၏လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း ဇာတ်ပို့ပေးသော်လည်း စန္ဒရားတစ်လုံးတည်းဖြစ်၍ မြိုင်ဆိုင်မှုအားနည်းပါသည်။ ကျေးတောသူမနုရုံတင်ပြသသည့်အခါတွင် စန္ဒရား၊ မယ်ဒလင်၊ တယောဟူ၍ တူရိယာပစ္စည်း(၃)မျိုးပါလာသည်။ ပရိသတ်များကြည့်နေစဉ် ဇာတ်ကို တီးခတ်ပို့ပေးကြသည်။ ထို့အပြင် အဆိုတော်တစ်ဦးလည်း ပါဝင်လာကြောင်းတွေ့ရသည်။ အဆိုတော်၏အမည်မှာ ဦးဖြိုးဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံး ရုပ်ရှင်အဆိုတော်အဖြစ် ဦးဖြိုးကို မှတ်တမ်းတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းအရ လိုက်ဖက်မည့်သီချင်းများကို သီဆိုအားဖြည့်သွားကြသည်။ တစ်စထက်တစ်စ ရုပ်ရှင်၏တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုကို တစ်ဆင့်ခြင်း တွေ့ရှိလာရသည်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အောင်မြင်မှုရသည်နှင့်အမျှ ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းရန် စိုင်းပြင်လာကြသည်။ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားမှုပိုမိုများပြားလာ၍ ရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီများ စတင်တည်ထောင်လာကြသည်။
No.(16), Winkabar Street, Bahan Tsp, Yangon.
95 01544270, 95 01544271
Copyright 2019, Myanmar Motion Picture Organization. All Rights Reserved.